नेपालगञ्‍जमा थप ६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ७५ पुग्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एकै दिन बाँकेमा थपिए १५ जना
वैशाख २१, २०७७ ठाकुरसिंह थारु, घनश्याम गौतम
नेपालगञ्‍जस्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा नेपालगञ्‍ज उपमहानगरपालिका ८ का ६ जनामा संक्रमण देखिएको प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. विनोद कुमार गिरीले पनि थप संक्रमित देखिएको पुष्टि गरे । शनिबार महेन्द्रपार्क टोलका एक ६० वर्षिय पुरुषमा संक्रमण देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अन्यको परीक्षण गरिएको थियो । आज संक्रमण देखिएका सबै १५ जना एउटै टोलका हुन् । आइतबार थप ६० जनाको स्वाब संकलन गरिएको पनि डा. गिरीले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १९:४९
प्रदेश १ मा पीसीआर र आरडीटी गरेर कुल ७ हजार २ सयको परीक्षण
वैशाख २१, २०७७ माधव घिमिरे
विराटनगर — प्रदेश १ मा का विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ७ हजार २ सय ७२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भए/ नभएको परीक्षण गरिएकोे छ । आइतबारसम्म द्रूत परीक्षण विधि (आरडीटी) र ल्याबमा गरिने परीक्षण (पीसीआर) बाट सो संख्यामा परीक्षण भएको हो ।
प्रदेशभरका नमुना संकलन गरेर धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको कोरोना सूचना डेस्कका अनुसार आरडीटी विधिबाट ५ हजार ७ सय १६ जनाकोे नमुना परीक्षण भएको छ । यसैगरी पीसीआर विधिबाट १ हजार ५ सय ५६ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्नेको संख्या आइतबारसम्म २ हजार ६३ पुगेको छ । आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा ३८ जना छन् । होम क्वारेन्टाइनमा जम्मा ६ हजार ९ सय २५ जना बसिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा हालसम्म ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी उदयपुरका छन् । त्यहाँ रहेको एक मस्जिद र मस्जिद छेऊको भुल्के बस्तीका गरी २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसैगरी झापामा दुईजना र भोजपुरमा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित सबैलाई विराटनगरस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा राखेर उपचारसँगै हेरचाह भइरहेको छ ।
यसैबीच, मोरङका विभिन्न ९ स्थानमा राखिएका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या आइतबारसम्म २ सय १५ पुगेको छ । तीमध्ये १७ महिलासहित १ सय ९१ जना घर फिर्ता भएका छन् । अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या २४ छ । कोभिड उपचार केन्द्रमा राखिएका ३१ जनाबाहेक कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा शंकास्पद एकजनालाई राखिएको छ । यसअघि कोसीसहित विभिन्न स्थानमा बनाइएको आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या ५९ थियो । तीमध्ये ८ महिलासहित २७ जना घर फिर्ता भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १९:४६